Daawo sawiro Xulka France oo ku guuleystay Koobka Adduunka & dabaaldegyo ka socda dalkaasi
Xulka Faransiiska ayaa noqday horyaalka kubada Cagta adduunka, kadib markii uu ciyaartii kama danbeysta ah ee finaalka uu goor dhoweyd ka badiyey xulka Croatia.
Ciyaarta oo goolal badan la iska dhaliyay ayaa ku soo dhammaatay 4 -2 oo guushu ku raacday xulka Faransiiska.
Waxaa dabaaldeg uu ka bilowday Garoonka ciyaartu ka dhaceysay, iyadoo kumanaan shacab ah ay isugu soo baxeen magaalada Paris iyo magaalooyinka kale ee Faransiiska.
Waa markii labaad taariikhda oo dalka Faransiiska uu ku guuleysto koobka adduunka, sanadkii 1998 oo 20 sano laga joogo ayey aheyd markii ugu horeysay ee faransiisku ku guuleysto koobkan.
Madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka qeyb galay daawashada ciyaarta finalka ah, waxaana la arkayey macron oo si xamaasad leh u taageeraya kooxdiisa sida ka muuqata sawirada hoose. For the latest news update please visit Saafifilms.com For more entertainment visit Saafistudio.com
WARKA 15 07 2018 Siyaasiga Cabdulaahi Ciilmooge oo sheegay in Jubaland ay caburin ku heyso shacabka
Sweden’s Somali Community Hit Particularly Hard By Coronavirus
WARKA 08 12 2017 Dibadbax looga soo horjeedo hadalkii kasoo yeera Trump oo Muqdisho ka…
Warka 02 09 2017 Shabaab oo qaraxyo ku weeraray suuq & saldhig ciidan oo ku…
WARKA 05 08 2019 Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dowlada Farmaajo kabaha la dulmaray waxyaabo badana…